indlela okudala umdali bangempela akubi malula. Umculi Mikhail Shemyakin (Chemiakin), cishe ngokufanelekile kungokwalabo kulesi sigaba sabantu.
Wachitha esengumntwana e-GDR, futhi engu-nane, uMichael wabuyela Leningrad, lapho engena hudshkolu e-Institute for them. Repin. Kule isikhungo Shemyakin ngokushesha axoshwe "non-ukuhambisana nezimiso Namaqiniso Socialist art" futhi "inkohlakalo esthetic" ofunda nabo. Ulimi uyakufanelekela ukuba ungungqondongqondo! umculi Young Mikhail Shemyakin kwadingeka basebenze ukuzihlanza, yesisebenzi, postman. Ngo-1962 kwasivulela embukisweni yokuqala engokomthetho imisebenzi by umdwebi.
"St Petersburg" Iqembu (1967)
Ngaleso sikhathi yayibizwa iqembu abaculi "Petersburg", okuyinto sidalwe Mikhail Shemyakin ezaziwayo. Painting, wabe esengena imijikelezo "yesehlakalo lomkhumbi olamandla ongedluli Petersburg", "Saint-Petersburg Carnival", "Izidumbu." Lapha ngesimo elibi echazwe esidlule waseRussia kanye nezifiso zayo lekusasa. Futhi kanye sefilosofi V.Ivanov bahlakulele theory ku letisha iconography - "zamagama elifanayo ezintweni eziphilayo", lapho inkululeko nentuthuko iye yaba esebenzayo ingxenye Mikhail Shemyakin. Imidwebo kwalesi sikhathi zisekelwe cwaningo yobuciko zenkolo ezivela ubudala ezahlukene kanye namazwe. Shemyakin ngisho iba imfundamakhwela we Pskov-Caves Monastery.
umsebenzi umdwebi sika ku "namaSoviet" sisethwe isihloko nokunakwa iziphathimandla kanye 'abafowabo' shayela. Baboshwe emuva kokuthi nemibukiso, ekuphucweni emthethweni imidwebo, ophoqelelwe ukwelashelwa ukuhlukumezeka kwengqondo. Kuyathakazelisa ukuthi, emazwini uMichael, umqalisi ukushushiswa kwakuvame abomthetho, futhi abazalwane comrades abaculi, amalungu Union. Zonke ukuthi wabhala Mikhail Shemyakin (imidwebo kwaleyo nkathi), ambalwa ngasinda.
Waba yini umphumela wesibindi imizamo emagunyeni afanele kanye nabantu abazibiza abaculi, kwaba ukuxoshwa Bioorganic Chemistry wase-USSR (1971). Kusukela ngaleso sikhathi, ithalente esichumayo Paris, bese - e-New York (1981), lapho amukelwa khona ukuqashelwa esizifanele we Ongoti yobuciko kweqiniso. Phesheya Shemyakin okuningi kwenziwe futhi yenzani ukuze Abalobi Russian nabaculi abagxeki beSonto, ukushicilela umsebenzi wabo futhi ukuhlela imibukiso yonyaka.
Bahlangana kakade e-Paris (1974) base beba abangane kusukela phakade. Imbongi kanye umdwebi, ngokuvumelana izinkumbulo abanye, uhlobo Symbiosis zokudala. Mikhail Vysotsky enikelwe izinkondlo zakhe nezingoma. Shemyakin - ngesineke izithombe, imidwebo umsebenzi uVladimir Semenovich. Futhi ngemva kokufa kwakhe - azidalile isikhumbuzo imbongi omkhulu, owamiswa ngo Samara. imifanekiso amane nambili kuphela imisebenzi Mikhail Shemyakin Vysotsky ngesineke. Imidwebo kulolu chungechunge abashiwo: "Ukuphela ukuzingela nezimpisi," "Coney fastidious", "Dome", "kaNebati", "Gypsy wami", "Londoloza Imiphefumulo yethu" futhi nabaningi abanye.
Ibe geniuses olukhulu Baryshnikov. Vysotsky ngenkathi kakade washada noMarina Vlady futhi kufika "ukuze uhlale 'eParis. Phakathi kobusuku, uVladimir wenziwa iculo lakhe elisha futhi kakade owaziwa ke Vysotsky Shemyakin futhi lathi lishona zazulazula osebeni Seine. Michael bakhumbula ukuthi wazizwa sengathi ayazi sazana, bese waphula - babonana ngemva ngokwahlukana eside futhi. Ngakho izinto eziningi ngathi komunye nomunye. Ngakho okuningi kwenzeka imicimbi phakathi nalesi sikhathi! Futhi-ke kwakudingekile ukuba bakhulume, ngesikhathi, kumnyama kubomvu.
Lokhu ubungani zokudala yathatha iminyaka embalwa nje ngaphambi kokufa imbongi, lapho umculi esiye sabhekana nzima. Futhi ngisho nangemva: Shemyakin eyanyatheliswa okokuqala phesheya, iqoqo eliphelele iculo nemisebenzi Vladimir Vysotsky.
Ngo-2000 yena wazalwa "I acabangwayo Museum" e Hudson (USA), okuyinto adalwe umculi Mikhail Shemyakin. Imidwebo eqoqwe khona - ngendaba ucwaningo okuqalwe kusenesikhathi ungagcina 70 - leyakheke ngezigaba ezahlukene, zefilosofi nezenkolo, zomlando lobuchwepheshe. Umphumela: ezinhlanu Shemyakin ukhishwa neziqu zobudokotela. It is eRussia eyaziwa noHlelo thematic "Shemyakin acabangwayo Museum", kukhiqizwa isiteshi "Emkhubeni Wokubulala" e 2002-2003. I bomdabu Peter Michael uhlela embukisweni imiphumela yocwaningo lwalo, ishicilela izinhlu of Fine Arts, ukufika e-Russia.
Kusukela imisebenzi omkhulukazi: Petersburg - isikhumbuzo uPeter Omkhulu, isikhumbuzo izisulu zezinhlekelele repressions zezombusazwe, isikhumbuzo abakhi lokuqala Petersburg. E-Moscow - ingoma "Izingane - izisulu of omdala imikhuba emibi 'nezinto ezibaziwe.
Arsenal kombhali zokudala - opera "I Ikhala" by Gogol, inguqulo yokuqala ye-ballet "The Nutcracker" ballet esekelwe Hoffmann sika "The Magic Nut".
Nge '90s futhi kuze kube namuhla, kanye V.Poluninym Shemyakin ulungiselela ukusebenza emadolobheni ahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Ngo-2007, umdwebi ubuyela France (Chateauroux). Lapha wayehlala futhi esebenza e bacondze etindzaweni letehlukene: umdvwebo, ebaziwe omkhulu, ubuhle bezwe ngoba yaseshashalazini kanye cinema. Lasekuqaleni kakhulu, ukudala namuhla Mikhail Shemyakin - izithombe doti. Baye undab 'uzekwayo Ongoti umsebenzi umculi BakaJehova emazweni amaningi.
Umshuwalense wabahambi phesheya: ukubuyekezwa, ukulinganisa kwezinkampani